Ukuqokelelwa kwetattoos kuyilo loyilo kunye nemibono | Ukuzoba
Iiteki zeatto azibonisi sixhobo sodwa, kodwa ukomelela kunye namandla abantu abaziphetheyo. Kwaye ngoku ndiza kwandisa ulwazi lwakho kancinci malunga noyilo lwe tattoo olujikeleze esi sixhobo sinamandla.
Ukuba ukulungele ukukhangela IiTattoo zesixhobo, uyakuqonda ukuba, iiattoo ze-ax kunye neetatoo ze-ax zezinye zezona zidumileyo. Kwaye ukuba unikwe ukhetho, baninzi abantu abakhetha ukufaka esi sixhobo kulusu lwabo. Abanye bakwenza oko kuba banentsingiselo ethile ngemvelaphi yabo ethobekileyo okanye ngenxa yomsebenzi abawenzayo.
Ingalo inokuba yindawo efanelekileyo yokufumana le tattoo, nangona yonke into iya kuxhomekeka kwindlela obonakala ngayo. Kukho nabo baye bazama ukufumana i-tattoo yezembe ebusweni babo, banomdla!
1 Zithetha ntoni iiattoo ze-ax?
2 Igalari eneengcamango ze-tattoo
Zithetha ntoni iiattoo ze-ax?
Iiteki ze-Ax zihlala zinxulunyaniswa nazo iimpawu de amandla, ubunkokeli okanye isidima. Kude kwadlula abemi baseYurophu xa badibana namajoni asemantla, i I-vikings, xa baqala ukubona izembe zenziwe umvambo kulusu lwabo kunye nezinye izinto zenkcubeko yabo, ezibenze baba njalo woyika ngabo bonke abachasi bakhe ukusa kwinqanaba lokukholelwa ukuba babenjalo esihogweni ngolusu lomntu.
Ixesha elingaphezulu, ezi tattoos bezifumana amandla phakathi kwabantu baseYurophu kwaye zisasazeka ngesantya esiphezulu ngamanani angapheliyo iintsingiselo. I eqhelekileyo ngakumbi zezi sizikhankanyile ngaphambili: amandla, ubunkokeli okanye isidima. Kodwa apho abanye Iintsingiselo ezichanekileyo zolu hlobo lweetatto ngokwe uyilo, umzekelo, izembe ezibini zawela luphawu lwe Ubuzalwana phakathi kwabantu okanye abantu.
Un intsingiselo ndinomdla wolu hlobo lweetattoo zolimo, lakuba kuphela ixesha lokuhlwayela, izembe langcwatywa ukuze lidlulise amandla emhlabeni kwaye ndinjalo izityalo ezomeleleyo nezinentabalala. Kwi yakudala iTshayina izembe lalilukiwe kwiingubo zamagosa akufutshane nomlawuli ukumela inqanaba lakhe kwezentlalo kunye nelakhe ukusondela kwamandla.
Ukulandela ngaphezulu iintsingiselo Kwiitattoos ze-ax, enye yezona ndawo zixhaphakileyo nezisetyenzisiweyo zizembe ezimbini ezifanayo kwaye zimele izimvo ezimbini eziphikisanayo ezisetyenziselwa oku. sixhobo; i umbono wokwakha nokonakalisa, Amanyathelo amabini ahluke ngokupheleleyo anokwenziwa ngesixhobo esinye.
Ukuzincama, ukunikezela, ukuzimisela unyana abanye ye iintsingiselo ixhaphake kakhulu kwiiattoos ze-ax. Umntu onesixhobo esinamandla se tattoo uyaqondwa ukuba unguye inako ukwenza nantoni na ukuze uhlangane neenjongo zakho okanye ukhusele eyakho kuyo nayiphi na imeko efuna oko ukusukela akayazi uloyiko.
Uyilo lwe tattoo yezembe lujoyina inkolelo ukuchuma kunye nokungena okoko izembe, kunye nobukhali balo, livula iindlela ezintsha. Kwaye emva koko, izembe elintlangothi-mbini inxulunyaniswa nobuHindu kuba bufanekisela ukhanyiso lwesibhakabhaka; Kwezinye iinkcubeko nkqu izembe linxulumene ne inkomo eyenza ukuba ibe ubuqili obunamandla iyonke kunye nesilwanyana.
Uyilo oluye lwasasazeka kakhulu kukuvotwa kwezembe encinci kwiminwe yesandla, ebonisa ukuba zisondele kangakanani iimfuno zethu ebomini.
Ngokuchasene noko, enye Abantu abafumana i-tattoo yezembe bangenza njalo ngenxa yembali engemva kwesi sixhobo kwaye ngeempawu umntu ozisebenzisayo kufuneka abenazo ukuze babe nako "umsebenzi". Kwaye ke zizembe zizixhobo ezomeleleyo eziye zakwazi ukunceda ukukhula komntu kunye nokuziphendukela kwemvelo amawaka eminyaka. Kwaye konke oku nangona ukusebenza kwayo kulula kakhulu.
Okokugqibela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba izembe ngu sixhobo ikhona phantse zonke iinkcubeko zehlabathi Kwaye, njengoko kusengqiqweni, nganye nganye inike ukuchukumisa kwayo, isenza ukuba sifumane uyilo, imizobo okanye ukumelwa kwezona zinto zaqala kwaye zahlukahlukene.
Isuka e amazembe eneentsiba ye abemi bomthonyama baseMelika kude kube Iimbumbulu ezikrwada zaseNordic, esi sixhobo sincede bonke abantu beplanethi ukuba iguquka, ikhule kwaye iphuhlise impucuko enamandla Namhlanje singamangqina kwimbali, imizobo okanye iintsomi ezithi zisuke koomakhulu nootatomkhulu ziye kubazali, zisuke ezi ziye kubantwana babo.
Kwanele ukubambelela ngokuqinileyo kwaye uvelise amandla ngexesha elifanayo nesantya ukuze umda wentloko yakho unike ifuthe. Kwilizwe le tattoo, zininzi Uyilo lwe-ax. Kwaye, njengoko benditshilo ekuqaleni kwenqaku, zikhona zonke iintlobo zazo, nangona sinako ukwahlulahlula zibe ziindidi ezimbini, ezo zinezembe elilula, kwaye ezo zibandakanya amazembe amabini awileyo.
Nangona, ukuba singena kwi I-ax tattoos intsingiselo, Sinokuzibandakanya kwiindidi ezininzi. Kwelinye icala, intsingiselo yayo yenkcubeko, enxulunyaniswa neeViking, kwelinye icala, yomsebenzi onzima (abagawuli bemithi okanye abacimi-mlilo, phakathi kwabanye) kunye noloyiko, olunxulunyaniswa nehlabathi leemovie kunye namabali ahlukeneyo apho esi sixhobo udlale indima enkulu.
Igalari eneengcamango ze-tattoo
Kwaye, njengesiqhelo, kwi Umvambo sifuna ukukunika kancinci Ukuphefumlelwa Uyilo lwakho olulandelayo kwaye yiyo loo nto sikushiya igalari encinci enee-tattoo ze-ax esizifumeneyo, siyathemba ukuba khonzai Nceda kwaye ndikunike izimvo zoqobo zoba isikhumba sakho.
Los I tattoo yezembe Balukhetho olunomdla kakhulu ngenxa yentsingiselo yabo enomdla ebesiyichazile ngaphambili. Ukuba ujonga izimvo ze uzenzele umvambo wezembe, Apha uza kubafumana. Kukho uyilo lwazo zonke izinto ozithandayo kunye nemibala. Ngaphezulu okanye ngaphantsi kokuqonda, elula, ecacisiweyo, ngombala kunye / okanye emnyama nomhlophe. Kukho iiattoo ze-ax ezifuna ukumela ngokuthembekileyo izembe eliqhelekileyo, ngelixa ezinye zinolwazelelo olusondeleyo kwizembe njengesixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Izinto kunye neeTattoos zezinto » Iiattoos, ingqokelela yoyilo kunye nemizekelo
Iitattoos ezinophawu lwe-Om, imeko yokomoya kulusu